Fisamborana teto an-drenivohitra :: Nifampitifitra ny zandary sy ny mpaka an-keriny • AoRaha
Namoy ny ainy teny amin’ny hôpitaly Alakamisy-Ambohidratrimo, i Patrick, tamin’ny zoma 17 janoary lasa teo. Voalaza ho mpaka an-keriny Karàna eto an-drenivohitra izy.
Efa voaheloka higadra mandra-pahafatiny saingy tafaporitsaka tany am-ponja. Nandeha nisambotra azy ny zandary misahana ny heloka bevava, eny Fiadanana, tany Mahitsy. Namaly tifitra ilay voatondro ho mpaka an-ke­riny, ka teo no nisian’ny fifa­mpitifirana.
“Nahazo angom-baovao avy amin’ny fikambanan’ireo Karàna izahay ny amin’ny fahitana an’io lehilahy io any Mahitsy. Olona voaheloka higadra mandra-pahafatiny, eny Tsiafahy, anefa izy saingy efa nafindra any amin’ny
fonjan’Ankazobe. Tany izy no tafavoaka ny fonja, araka ny loharanom-baovao. Nilaza ho mahalala azy avokoa ireo Karàna nisy naka an-keriny teto an-drenivohitra rehefa naseho azy ireo ny sariny”, hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny zandarimaria misahana ny heloka bevava.
Basy poleta iray mbola nisy bala maromaro no tra-tehaka tany amin’ity jiolahy namoy ny ainy, rehefa notsa­boina noho ny ratra nahazo azy teny amin’ny hopitaly Alakamisy-Ambohidratrimo.